Khabar Kantipur » आँखा स्वस्थ राख्न यी १० तरिका अपनौनुहोस
आँखा स्वस्थ राख्न यी १० तरिका अपनौनुहोस
आँखा हाम्रो अभिन्न अङ्ग हो हामी आफ्नो शरीर तन्दुरुस्त राख्नका लागि व्यायाम गर्ने, पौष्टिक आहार सेवन गर्ने, प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने आदि गर्र्छौं । तर हाम्रो स्वास्थ्यको महत्त्वपूर्ण अंग आँखालाई कसरी स्वस्थ राख्न सकिन्छ भन्नेतर्फभने ध्यान पुर्याउन सकेका हुँदैनौं । आँखा संवेदनशील र सजिलै संक्रमण हुने अंग हो । यसलाई धूलो, धूवाँ, भाइरस, ब्याक्टेरिया आदिले सजिलै क्षति पुर्याउन सक्छ । यसलाई जोगाएर स्वस्थ राख्न हामीले अनेकौं उपाय अपनाउन सक्छौं । यहाँ आँखा जोगाएर स्वस्थ राख्ने मुख्य १० वटा टिप्सहरु दिइएको छ ।
१ नियमित जाँच
कतिपय व्यक्ति यस्ता पनि भेटिन्छन्, जसले कहिल्यै पनि आँखाको जाँच गराएका हुँदैनन् । जब समस्या आर्इपर्छ अनि मात्र उनीहरु आँखा अस्पताल पुग्ने गरेको पाइन्छ । तर बाल्यकालदेखि नै नियमित आँखा जँचाउनु जरुरी हुन्छ । पाँच वर्षुनिका बच्चाहरुमा देखा पर्ने रोगहरु जस्तै- क्रियाशील नभएको आँखा (Lazy Eye), डेढो आँखा (Crossed Eyes) लाई उपचार गरेर निको पार्न सकिन्छ । आँखामा पर्ने प्रभाव हेरेर सोहीअनुसार आँखा जँचाइरहनुपर्छ । भविष्यमा आउन सक्ने खतराबाट सचेत हुनका लागि आँखामा केही नभए पनि २० देखि ३० वर्षम्म कम्तीमा एक पटक र ३० देखि ४० वर्षम्ममा दुइ पटक आँखाको जाँच गराउनुपर्छ ।
आँखाको देख्ने शक्ति पनि उमेरसँगै परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । जति उमेर बढ्दै जान्छ त्यति आँखामा समस्या थपिंदै जान्छ । बेलैमा सचेत भए मस्कुलर डिजेनरेसन (Mascular Degeneration, ग्लुकोमा (Glaucoma) जस्ता आँखामा लाग्ने खतरनाक रोग बेलैमा जँचाएर निको पार्न सकिन्छ । ग्लुकोमा भएका व्यक्तिले नियमित जँचाउनुपर्ने हुन्छ । किनभने यो रोग धेरै खतरनाक हुन्छ । जब हामी ४० वर्षकाट्छौं तब मधुमेह, रक्तचाप, मुटुको रोगजस्ता धेरै किसिमका रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ । मधुमेह वंशाणुगत पनि हुन सक्छ । यो रोगले आँखामा धेरै प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले ४० वर्षछि नियमित आँखा जँचाइरहनुपर्छ ।
२ उचित चस्माको प्रयोग
चस्माले आँखालाई धूलो, धूवाँ, कीटाणु आदिबाट बचाउने मात्र होइन, यसले आँखामा चोटपटक लाग्न तथा विकिरणबाट पनि जोगाउँछ । घाममा लगाउने चस्मा (Sunglasses) सत प्रतिशत अल्ट्रा भायोलेट ( (UV)विकिरणबाट सुरक्षा दिने खालको हुनुपर्छ । म्याक्युलर डिजेनरेसन नामक पुस्तकका सह-लेखक डा. लाइलाज मोगका अनुसार नीलो तर·अर्न्तर्गत भायोलेट -रातो र नीलो मिसिएको) र नीलो विकिरणले आँखाको रेटिनालाई असर गर्छ । बजारमा व्यापारिक हिसाबमा बिक्री भइरहेका खैरा-खैरा रंगका चश्माले नीलो भायोलेट विकिरण फिल्टर गरी आँखालाई रक्षा गर्छ । बढी चमक आउने स्थान जस्तै- हिउँ, पानीको सतह, घाम लागेको स्थानमा जाँदा यस्ता चस्माको प्रयोगका साथै ह्याटले पनि आँखा जोगाउन सकिन्छ । तर डाक्टरले सिफारिस गरेको चस्मा लगाउने गर्नुपर्छ ।
कलकारखानामा, मेसिनरी उपकरण चलाउने ठाउँमा, घर बनाउनेजस्ता निर्माणसम्बन्धी कार्य हुने ठाउँमा काम गर्दा साना-साना कणहरु उडेर आँखामा छिर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । त्यस्ता ठाउँमा काम गर्ने व्यक्तिले आँखाको विशेष ध्यान दिनु आवश्यक पर्छ । यस अवस्थामा साधारण किसिमको चस्माको प्रयोग गर्न सकिन्छ । जो व्यक्ति वायरिङ गर्ने काम गर्छ उसले चाहिँ बेग्लै किसिमको कालो चस्माको प्रयोग गर्न आवश्यक छ । सामान्य कार्य जस्तै- कीला ठोक्दा भित्ताको प्लास्टर उडेर आँखामा पर्न सक्छ र सोही कीला उछिट्टएिर पनि आँखामा पर्न सक्छ । त्यसैले सामान्य कुराबाट आँखालाई बचाउन पनि सधैँ सजग रहनुपर्छ ।
४ कन्ट्याक्ट लेन्स
चस्मा वा लेन्स प्रयोग गर्दा पसलेको परामर्शमा होइन कि सम्बन्धित डाक्टरलाई जँचाएर मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । लेन्स लगाउँदा झन् विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यसमा लागेको धूलो राम्ररी सफा गरेर मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । कसैले त मुखमा हालेर थुकले लेन्स सफा गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी थुकले सफा गर्दा आँखामा संक्रमण हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले उचित सामान र उचित तरिकाले लेन्स सफा गर्नुपर्छ । चस्मा त आँखा बाहिर राख्ने भएकोले साधारण किसिमले सफा गरे हुन्छ तर लेन्स आँखाभित्र लगाउने हुनाले यसको सफाइ गर्दा तथा लगाउँदा निकै ध्यान पुर्याउनुपर्ने हुन्छ ।
५ आँखाको पोषण
आँखा स्वच्छ र निरोगी राख्न चाहिने पोषण तत्त्वमा भिटामिन ँए’ महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । जुन तत्त्व गाजरबाट पाउन सकिने हुनाले यसको सेवन आँखाका लागि लाभदायक हुन्छ । भिटामिन ँए’ रेटिनाका लागि अति आवश्यक तत्त्व हो । यस्तै बन्दाकोपी, तोरीको साग, पालुङ्गो आदिमा पाइने लुटियन ((LUTION) तत्त्वले मस्कुलर डिजेनरेसन निको हुन्छ । आँखालाई ओमेगा-३ फ्याटी एसिडको पनि जरुरी पर्छ, जुन माछामा पाइन्छ । यसले आँखामा सुख्खापन हुनबाट बचाउँछ ।
पाको उमेर हुँदै जाँदा आँखा सुक्न सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । आँसु बनाउने ग्रन्थिले ठीकसँग काम गर्न नसक्नु नै यसको मुख्य कारण हो । यसले आँसु मात्र नभएर आँखामा हुने श्लेष्मा (MUCUS) र तेल (OIL) लाई पनि प्रभाव पार्छ । तेल आँखाको माथिल्लो भागको सानो ग्रन्थिबाट रसाएर आउँछ । जब हामीले आँखा झिम्क्याउँछौं तब ग्रन्थिबाट तेल रसाएर आउँछ । यो तेलले आँखामा आँसु सुक्नबाट बचाउँछ । यदि तेल राम्रोसँग निस्केन भने सबै आँसु बाफ भई उडेर जान्छ, जसले गर्दा आँखा सुक्खा हुन्छ । अनि आँखा खोल्न र बन्द गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । ओमेगा-३ फ्याटी एसिडले आँखा रसिलो पारिराख्न मद्दत गर्छ । अधिक हिटर ताप्ने, आगो ताप्ने वा ताप आउने ठाउँमा काम गर्नेहरुको आँखा सुख्खा हुन सक्छ । त्यस्तै एयर कन्डिसनरले पनि आँखा सुख्खा बनाउँछ । तेज गतिको हावा, पंखा, गाडीको एयर कन्डिसनरले पनि आँखा सुख्खा पार्ने गर्छ । त्यसैले आँखा सुख्खा हुन नदिन ताप र हावाबाट सक्दो आँखालाई बचाउनुपर्छ ।
धूमपान गर्नु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ भन्ने कुरा बारम्बार सुने पनि यसका अम्मलीहरुले धूमपान गर्न छोडेको पाइँदैन । धूमपानले फोक्सोको क्यान्सर हुन सक्ने कुरा प्रायः सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो तर डाक्टरहरुका अनुसार धूमपानले फोक्सोको क्यान्सर हुनुभन्दा अगाडि नै आँखाको दृष्टिलाई असर गरेको हुन्छ । त्यसैले आँखाका लागि धूमपान त्याग्नुपर्छ ।
८ आँखामा पर्ने दबाब
कम्प्युटरमा लामो समयसम्म काम गर्दा यसको विद्युतीय प्रभाव र एकनासको हेराइले आँखामा दबाब पर्छ । जसले गर्दा आँखाको हेराइ कमजोर हुने, आफैं आँसु झर्ने, आँखा पोल्नेजस्ता समस्या देखा पर्छ । यसबाट बच्न छिन्-छिन्मा कम्प्युटरको स्त्रिmनबाट बाहिर हेरेर आँखालाई आराम दिनुपर्छ, समय-समयमा आँखा झिमझिम गर्नुपर्छ । सुख्खा भएमा आँखामा कृत्रिम आँसु पनि लगाउन सकिन्छ । यसले आँखा रसिलो बनाइराख्ने हुनाले सजिलै आँखालाई यताउता घुमाएर हर्ेन सकिन्छ ।
९ परिवारबाट थाहा पाउनुपर्ने वंशाणुगत रोग
आँखाको रोग प्रायः वंशाणुगत हुन सक्छ । आफ्ना पूर्वजहरुलाई कुनै आँखाको रोग थियो कि भन्ने कुरा परिवारबाट थाहा पाइराख्नुपर्छ । यदि त्यस्तो रहेछ भने डाक्टरलाई जानकारी दिनुपर्छ । त्यस्तै आँखामा केही गडबड भएको महसुस भएमा आँखा ब्रि्रन नपाईकन डाक्टरसँग कुरा गरिहाल्नुपर्छ ।
रोग लाग्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै बुद्धिमानी हो । त्यसैले परिवारको सहयोगमा बेलैमा आँखा जँचाएर यसमा पुग्न जाने क्षतिलाई कम गर्नुपर्छ ।
१० स्वस्थ रहने
हरियो तरकारी, माछा आदिबाट आँखालाई चाहिने तत्त्व प्राप्त गर्न सकिन्छ । साथै नियमित व्यायामले शारीरिक प्रणालीहरुको सञ्चालन सुचारु गर्राई आँखामा पर्ने चाप कम गर्न सकिन्छ । हरियो सागसब्जी तथा व्यायामले मधुमेहका रोगीहरुको आँखा र स्वास्थ्यमा पनि लाभ पुग्छ । समय-समयमा गरिने नियमित जाँचले शरीरमा लागेको रोग छिटो पत्ता लगाउन सकिन्छ । आँखामा केही असर भएको महसुस भएमा तुरुन्त डाक्टरबाट परामर्श लिई उपचारतर्फलागिहाल्नुपर्छ । सम्पूर्ण शरीर स्वस्थ भएमा आँखा पनि स्वस्थ हुन्छ ।
प्रस्तुतिः रञ्जिता श्रेष्ठ/स्रोतः हेल्थ नेट
तपाइहरुले शेयर गरिदिनु भयो भने अरु जानकारी पोस्ट गर्न हामीलाई हौसला मिल्ने छ …. plz शेयर गर्ने गर्नुहोला